Sierra Foothills: Wine usụn̄ ke California
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Sierra Foothills: Wine usụn̄ ke California
Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Education • News • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Mmanya & mmuo
California nwere ọtụtụ ebe mmanya, gụnyere ụfọdụ ebe ama ama n'ụwa. Ma zoro n'etiti ọbụna ndị profaịlụ dị elu bụ mmanya mmanya ndị na-emeghị njem na-egosipụta ọmarịcha ime obodo, mmanya ndị na-atọ ụtọ na, mgbe mgbe, ndị ọbịa pere mpe. Iji nyere ndị na-eri nri aka ịchọpụta mmanya ọhụrụ na mmanya ọhụrụ n'oge ọkọchị a, usoro Wine Institute nke California Wine Country Back Roads usoro gosipụtara ụzọ mmanya na mpaghara mmanya.
Sierra Foothills nwere ihe karịrị mmanya 200 ebe ndị ọbịa nwere ike ịchọta ubi vaịn ugwu na ụdị mmanya dị iche iche toro na nso obodo Gold Rush akụkọ ihe mere eme na ogige ntụrụndụ mba dị egwu na mpaghara ọzara. Ubi vaịn foto Lava Cap Vineyard.
Mpaghara Mmanya nke Sierra Foothills
California Gold Rush site na 1848-1855 mere na etiti mpaghara mmanya nke Sierra Foothills nke kpuchiri acre 2.6 nke ugwu na-agagharị, obodo ochie ndị na-egwupụta akụ na ọtụtụ ubi vaịn ndị mara mma ma dị elu na steeti. Mpaghara ahụ bụ ogige maka obere, wineries na-elekọta ezinụlọ mara maka akụkọ ihe mere eme ha, 100 afọ gbakwunyere grape na mmanya mmanya zuru oke, nke dị na mpaghara asatọ-Amador, Calaveras, El Dorado, Mariposa, Nevada, Placer, Tuolumne na Yuba. N'ebe a, ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ịkọcha mkpụrụ vaịn ndị kachasị ọhụrụ na ụfọdụ ọmarịcha ịma mma California, ebe mpaghara mmanya a nwere ogige atọ nke mba atọ yana mpaghara ọzara 20 gụnyere Yosemite National Park na Lake Tahoe.
TASTE: Mpaghara Sierra Foothills bụ ebe obibi karịrị win win 200 na ụdị mkpụrụ vaịn dị iche iche. Adorgbè Amador, nke dị na ugwu ọdịda anyanwụ nke ugwu Sierra Nevada, gunyere ihe karịrị mmanya iri anọ — ọtụtụ ndị ọkachamara na Zinfandel, Barbera na mmanya ndị yiri Rhône. Na Calaveras County, ebe Mark Twain nyere ógbè ahụ nkwupụta ya ka ọ mara aha ya na akụkọ kacha mma ya "The Jumping Frog of Calaveras County," enwere karịa ụlọ iri atọ na iri abụọ na ise na Main Street nke Murphys. Dogbè El Dorado, nke nwere ubi vaịn ya nke dị n'elu ndagwurugwu ahụ, na-egosipụta mmanya iri asaa na-emepụta ihe niile sitere na iche iche dị iche iche nke Cabernet ruo na mmanya e mere site na ụdị mkpụrụ vaịn Rhône, German, Italian na Spanish. A pụkwara ịchọta nkume ndị dị n'okporo ụzọ dị na Nevada County, Placer County na Yuba County. Maka uto nke ọtụtụ mpaghara mpaghara, gaa njem nlegharị anya na Highway Highway 40. Okporo ụzọ na-amalite na Oakhurst, wee fechaa gafere ugwu site n'ọtụtụ mpaghara winery-bara ọgaranya, gụnyere Amador, Calaveras, El Dorado, Nevada na ndị ọzọ.
Njegharị: Na-eme ememme mmanya, nri na ọrụ ubi na mpaghara June 20-21 n'oge Placer Wine Trail's Days of Summer, njem na-eduzi onwe gị nke na-egosipụta nri, egwu na ahụmịhe mmụta na nkwụsị ọ bụla na Placer County. Ememme Barbera nke Amador County na-eme kwa afọ na Septemba n'oge Wine Wine na-enye ihe ụtọ site na ihe karịrị 50 wineries mpaghara, tinyere nri mara mma, egwu egwu na ndị na-ere ahịa aka. Nakwa na Septemba bụ WineDerLust Renegade Wine Festival na Placerville, bazaar mmanya na egwu na-egosi ihe kacha mma nke El Dorado.